तुलसीपुरमा स्मार्ट सिटी र केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन हुने
तुलसीपुर,कात्तिक २१ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका वैठकले भुमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा सवैको लगत लिने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण गर्ने या सोही ठाउँमा राख्ने भन्ने वारेमा निर्णय गरिने नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले वताउनुभयो । उहाँले वास्तविक सुकुम्वासी र भुमिहिनले जग्गा पाउन सकुन भन्ने वारेमा उपमहानगरले विशेष कार्ययोजना समेत वनाउने वताउनु भयो । ...
आज बुधवार घोराहीमा वाम गठबन्धनको संयुक्त प्रशिक्षण हुने
दाङ २२ कार्तिक । जिल्लाको घोराहीमा आज एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त प्रशिक्षण गर्ने भएका छन् । वाम गठबन्धनको संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति क्षेत्र नम्बर २ ले आज बुधवार घोराहीमा हुने संयुक्त कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा सहभागी हुन सबैमा अनुरोध गरेको छ । समितिका संयोजक हेमराज शर्मा ‘डायमण्ड’ र सहसंयोजक देवराज विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो अनुरोध गर्नुभएको हो । विहान ११ ...
पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल गुडाउने वाम गठबन्धनको सपना
काठमाडौं, २२ कार्तिक । वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षभित्र जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गरी विकासशील राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने मंगलबार जारी एमाले–माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नतस्तरको राष्ट्रमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र ...
अब वामपन्थीको सरकार २० बर्ष चल्छ , यसैले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ – महरा
दाङ, २१ कार्तिक । संयुक्त निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को आयोजनामा बुधवार लमहीमा संयुक्त प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पर्ने सवै तहवाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षीत गर्दै मंसीर २१ गते हुदै गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वाम गठवन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजय वनाउन एक भएर लाग्न अपील ...
मानव तस्करको जालोबाट दुई किशोरीको उद्धार, तस्कर प्रहरी नियन्त्रणमा
माधव बेल्वासे कपिलवस्तु , २१ कार्तिक । कपिलवस्तुको कृष्णनगर वाट दुई किशोरिको उद्धार गरिएको छ । मानब बेचबिखन तथा लैगिक हिंसा बिरुद्ध क्रियाशिल संस्था केआई नेपाल र नेपाल प्रहरि कृष्णनगरको संयुक्त टोलिले मानब बेचबिखन तथा ओसापसारको आरोपमा एक जना बिचौलिया नियन्त्रणमा लिएको छ । बिचौलियालाई मानब बेचबिखन तथा ओसार पसारको अन्तरगत इलाका प्रहरि कार्यलय कृष्णनगरमा मुद्धा दर्ता गरिएको छ । बिचौलिय ...
रोटरीको मानविय सेवा प्रशंसनिय – डिष्ट्रिक गभर्नर गिरी
दाङ, २१ कार्तिक । रोटरी ईन्टरनेशलन डिष्ट्रिक ३२९२ का डिष्ट्रिक गभर्नर संजय गिरीले रोटरीले सेवामुलक कार्यमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । यसको लागि पहिला क्लब बलियो हुनुपर्ने र नियमित रुपमा सदस्य थप गर्दै लग्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । रोटरी क्लव अफ तुलसीपुर सिटीको अफिसियल क्लब भिजिट कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी गिरीले क्लबले गरेका सम्पूर्ण गतिबिधीहरु उल्लेखनिय रहेको र ...
स्मार्ट सिटी बनाउन कार्यदल गठन, को-को परे कार्यदलमा ?
घोराही, २१ कार्तिक । घोराही उपमहानगरपालिकाले नगरलाई अत्याधुनिक र सबै सेवा सुविधायुक्त शहर स्मार्ट सिटी बनाउने प्रकृयालाई अघि बढाउन कार्यदल बनाएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा उपप्रमुख सहित वडा नम्बर १५, १६ र १८ का वडा अध्यक्षहरु, योजना शाखा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा घोराही, कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल, नेपाल ...
कुखुराको खोरमा उपप्रधानमन्त्रीका पुत्र भेटिएपछि…
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, २१ कार्तिक । केहि समय अगाडी उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा सरकारी कोटामा चाइना पढ्न गएको भन्ने समाचार केहि अनलाइनहरुमा छाएको थियो । तर उपप्रधानमन्त्री पुत्र निर्मल महरा एटम चाइना पढ्न होइन कुखुरा पालन व्यावसायमा जमेको भेटिए । देश र जनताको मुक्तीका लागि भन्दै जनयुद्धमा होमिएका जनमुक्ती सेनाका एक सफल कमाण्डर एटम औपचारिक रुपमा प्रमाणपत्र तह उतिर्ण हुन् ...
प्रदेश नं. ५ शैक्षिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको हव बन्छ : महरा
इन्द्रेणी संवाददाता बाँके, २१ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधानमन्धी कृष्णबहादुर महराले प्रदेश नम्बर ५ लाई शैक्षिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको हवको रुपमा विकास गरिने बताएका छन् । आज मंगलवार बाँकेमा आयोजना गरिएको वाम गठबन्धनको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश नम्बर ५ शैक्षिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त सम्भावित भएकाले यसलाई यी क्षेत्रको हवकै ...
चितवनमा प्रचण्डले दुई हजारलाई पार्टी प्रवेश गराए
चितवन, २१ कार्तिक । चुनावी प्रचारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ चितवनबाट करिव २ हजारभन्दा वढीलाई पार्टी प्रवेश गराएका छन् । चार दिनको अवधिमा चार सभासद, राप्रपा चितवनका अध्यक्ष सहितको २ हजारभन्दा वढीलाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गराएका हुन् । गृह जिल्ला चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार दर्ता गराएका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले चुनावी दौडधसपमा ...